Gcina izithembiso zakho | Martech Zone
NgoLwesine, Novemba 12, 2009 NgoLwesithathu, ngoFebruwari 10, 2016 Douglas Karr
Umhlobo wayendixelela ibali ngenye imini. Wayeziva ukuba utshisiwe yinkampani ebesenza ishishini nayo kwaye kufuneka ayiveze ngayo. Kwiinyanga ezininzi ezidlulileyo, xa ubudlelwane buqala, bahlala phantsi bavumelana ngendlela abaza kusebenza ngayo kunye, bachaze ukuba ngubani oza kwenza ntoni kwaye nini. Izinto zazibonakala zintle ekuqaleni. Kodwa njengoko isigaba sasemva komtshato saqala ukunxiba, wabona imiqondiso yokuba konke kwakungekho njengoko bekuxoxiwe.
Ngapha koko, enye inkampani ibingazigcini izithembiso ezizenzileyo. Uye wajongana neenkxalabo zakhe nabo kwaye bathembisa ukuba abayi kuyivumela ukuba iphinde yenzeke, ukugcina umkhondo. Ndiqinisekile uyayibona ukuba iyaphi lento. Kutshanje bayenzile kwakhona 'kwaye ngeli xesha ngendlela enkulu. Bavumile ukujongana nemeko ngendlela ethile kwaye emva koko omnye wabafana babo wayivuthela ngokupheleleyo. Wahamba esuka kwishishini.
Oku kunxulumene nantoni nentengiso? Yonke into.
Yonke into oyenzayo kukuthengisa
Ayisiyo ntengiso yakho kuphela kunye neposti yakho kunye neewebhusayithi zakho kunye neendawo zakho zokuthengisa. Yonke into. Kwaye xa usenza izithembiso ngokucacileyo okanye ngokungacacanga, ucela umntu ukuba akuthembe. Ukuba unethamsanqa, baya kukunika ukuthembela kwabo. Ukuba awuzixhasi izithembiso zakho, baya kuphulukana nentembelo yabo. Yinto elula nje leyo.
Ukuba ucinga ukuba imveliso yakho yeyona ikhawulezayo, kungcono ibe yeyona ikhawulezayo. Ukuba uthi uphendula iifowuni ngeeyure ezingama-24, kungcono uphendule iifowuni ngeeyure ezingama-24. Hayi ifs, ands, okanye buts. Abantu banokuxolela. Unokwenza impazamo. Kuya kufuneka uphinde ufumane loo nto uyilahlekileyo.
Kodwa, ngekhe ukhohlise ngabom. Ayivumelekanga. Thetha into oza kuyenza emva koko uyenze. Umama wayesoloko esithi,
Ukuba wenza isithembiso, gcina.
Ngubani owaziyo ukuba wayethetha ngeshishini, naye '
Novemba 12, 2009 ngo-11: 05 PM
"Yonke into oyenzayo ithengisa". Uyibethelele ngesi sigwebo. Nokuba uvuka kwaye uzijonge esipilini, kukho ukuthengisa okubandakanyekileyo: uyazithengisa kuwe. Ukuba ubonakala udiniwe, uya kuziva udiniwe. Ukuba ujongeka unamandla, oh boy, jonga! Iya kuba lusuku oluhle! Enkosi Nila. –UPawulos
Nov 13, 2009 kwi-12: 36 AM
Malunga neminyaka eli-10 eyadlulayo omnye wabathengisi endibathandayo wandixelela oku: Kuya kufuneka uxelele umthengi inyani amaxesha ali-1000 ngaphambi kokuba bakuthembe kodwa ukuba uyaphoswa nokuba kukanye abasayi kuphinda bakuthembe. Ukuba uyayitsho, yenze.
Novemba 12, 2009 ngo-10: 12 PM
Unyanisile! Ndisebenze kwezinye iinkampani ezinamaqela athengisayo abancancisa abantu nje ngezithembiso zeziphumo ezihle- ababesazi ukuba abanakudibana. Ingxaki yayingeyiyo nje ingxaki yokuthengisa kunye nentengiso, yayinzulu ngakumbi kuba ichaphazele inkxaso yabathengi kunye nabaphathi beakhawunti. Akukho nto yoyikekayo njengokubeka ulindelo ekungafanelekanga ukuba uzibophelele kulo!
Iposti eyoyikekayo! Enkosi kakhulu ngokwabelana!
Novemba 13, 2009 ngo-1: 21 PM
Into ebalulekileyo ekufuneka uyikhumbule ngumbono wotshintsho. Ukuba wenze impazamo kwinto ethile yilungise kwaye uzame ukuba ungaze uphinde uyenze loo mpazamo.